Aya ndiwo magadzirirwo aunoita iwo matsva ekuvanzika maficha mu macOS Monterey | Ndinobva ku mac
Manuel Alonso | 08/11/2021 10:00 | macOS Monterey, Tutorials
macOS Monterey yatove nesu uye pese painenge paine itsva sisitimu yekushandisa, humwe hunhu hwayo uye mabasa anoitwa nenzira yakati siyanei pane yaaive mune mamwe masisitimu anoshanda. Kuburikidza neiyi positi isu tichaedza kukutsanangurira nzira yekugadzirisa iyo zvitsva zvakavanzika.
1 Maikorofoni kuwana kana uchirekodha pa macOS Monterey
2 iCloud Private kana Apple VPN
3 Yakavanzika email
4 More zvakavanzika email
Maikorofoni kuwana kana uchirekodha pa macOS Monterey
Kwemakore, maMacs airatidza kana kamera iri kushandiswa kuburikidza neyakasvibira chiratidzo mwenje iyo inowanikwa padyo nekamera. Nekuburitswa kweMacOS Monterey, Apple ikozvino inoratidza chiratidzo chesoftware pakupinda maikorofoni.
Kuburikidza neControl Center, chiratidziro chitsva chesoftware chinowedzera mwenje wekhamera nekukuratidza nguva yega yega app inowana maikorofoni. Kuti uwane chinhu chitsva ichi, tarisa chiratidzo cheControl Center mukona yepamusoro yekurudyi yeMac menu bar.Kana application iri kushandisa maikorofoni, pachave nerorenji dot padivi peiyo Control Center icon. Isu tinodzvanya pane iyo Control Center icon kuti uone zita rekushandisa rinowana maikorofoni.
iCloud Private kana Apple VPN
Apple inoitsanangura se "sevhisi inokubvumira kuti ubatanidze kune chero network uye kufamba neSafari mune zvakatonyanya kuchengetedzeka uye zvakavanzika. Inoshanda nekuvharidzira yako internet traffic sezvainosiya mudziyo wako, kuti pasave nemunhu anogona kuibata nekuiverenga. Inobva yatumirwa kuburikidza maviri akapatsanurwa internet relay, kudzivirira chero munhu kubva kushandisa yako IP kero, nzvimbo, uye kubhurawuza chiitiko kugadzira yakadzama mbiri nezvewe.
iCloud Private Relay inowanikwa mune yeruzhinji vhezheni yeMacOS Monterey, asi inodzimwa nekusingaperi nekuti Apple inoti ichiri mu "beta". Inogona kugoneswa.
Basa iri rinobvumira cgadzirazve madhiri eemail akasarudzika uye akasiyana Iwo anotumirwa kubhokisi rako rekutumira, zvichikubvumidza kuti utumire uye ugamuchire maemail pasina kugovera yako chaiyo email kero nemunhu.
Kuti ushandise basa iri, kutanga ita shuwa kuti yakagoneswa muSystem Preferences application. Kudzvanya pa "Apple ID" uye kutsvaga sarudzo "Viga email yangu" mune runyorwa rwemabasa. Apa ndipo paunogona kuwana ese ekare kero akagadzirwa nebasa iri. Kubva ipapo, kana iwe ukakumbirwa kupa webhusaiti nekero yako yeemail, senge kusaina sevhisi kana kutenga, Safari inongokukumbira kuti ushandise 'Viga email yangu'.
More zvakavanzika email
Tinoenderera mberi nemabasa ekuvanzika kusimbisa email, kunova uko Apple yakanyanya kuve "kuisa mabhatiri" pazvinhu zvakavanzika. Hazvishamise mushure mematambudziko mazhinji avaive nawo pachikumbiro ichi. Asi izvozvi tinogona kutaura kuti Apple yaisa nyama yese pane grill uye inoda kuti vadaro mamiriro ezvinhu ekare haadzokororwi.
Iro basa ratiri kutaura nezvaro izvozvi, rine chinangwa chekudzivirira iyo yega data yevashandisi veMail App, kubva mukukanganisa data ravo. Kuti uite izvi, basa idzva inodzivirira vanotumira kubva kushandisa mapikisi asingaoneki kuunganidza ruzivo nezve mushandisi. Ichi chitsva chinobatsira vashandisi kudzivirira vanotumira kubva pakuziva pavanovhura email uye vanovhara IP kero yavo kuitira kuti isakwanise kubatanidzwa kune zvimwe zviitiko zvepamhepo kana kushandiswa kuona nzvimbo yavo.
Unogona kugonesa kana kudzima chimiro ichi MuMail application paMac, nekudzvanya "Mail" mukona yekumusoro kuruboshwe yemenu bar, uchisarudza "Zvaunofarira" uyezve "Zvakavanzika."
Sezvauri kuona, iwo muunganidzwa wakanaka kwazvo wekuchengetedzwa kwekuvanzika uye matanho ekuvimbisa, ayo nhasi ndeimwe yemisoro inonyanya kunetsa kune vashandisi vega paunenge uchishandisa zvigadzirwa zvemichina. Kunetseka kwakawedzera sezvo basa kubva kumba richiwedzera nekuda kwedenda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Heano maitiro ekumisikidza iwo matsva ekuvanzika maficha mu macOS Monterey